China 100 gsm / 160gsm Fiberglass Mesh ifektri kanye nabaphakeli | Yuniu
I-fiberglass mesh iyindwangu ye-fiberglass leno njenge-substrate, i-anti-emulsion polymer enamathela ngemuva kokucwiliswa, enokumelana okuhle kwe-alkali, ukuguquguquka namandla okuqina okuqinile, ingasetshenziswa kakhulu kuhlelo lokuqedela ngaphandle (EIFS), uhlelo lokufulela, imabula, njll.
Into Ingqikithi yesisindo (gsm) Usayizi anezikhala (mm) Aluka
Anezikhala fiberglass 110gsm 4 * 4 leno
Anezikhala fiberglass 160gsm 6 * 6 leno
1. Ukuzinza okuhle kwamakhemikhali. Iphikisana ne-alkali, i-asidi, amanzi, ukuguguleka kukasimende nokunye ukugqwala kwamakhemikhali; inamandla amakhulu okubopha ane-resin futhi ancibilika kalula e-styrene.
2. Amandla aphezulu, i-modulus ephezulu nesisindo esincane.
3.Ukuzinza okungcono kobukhulu, kuqinile, kuyisicaba, akulula ukuncipha, ukukhubazeka nokuma.
4. Ukumelana okuhle komthelela. (Ngenxa yamandla ayo aphezulu nokuqina)
5. Anti-isikhunta futhi oxosha izinambuzane.
6.Ukuvimbela umlilo, ukulondolozwa kokushisa, ukufakwa komsindo nokufakwa kokushisa.
1) Izinto zokuqinisa udonga (njenge-fiberglass wall mesh, i-GRC wallboard, i-EPS yangaphakathi yokufaka ibhodi, ibhodi le-gypsum, njll.)
2) Imikhiqizo eyenziwe ngosimende ethuthukisiwe (njengezinsika zamaRoma, imikhuhlane, njll.).
3) Granite, inetha KaMose, zemabula emuva inetha.
4) Manzi ulwelwesi indwangu kanye asphalt ophahleni ungangenisi amanzi.
5) Gcizelela impahla yamathambo epulasitiki nemikhiqizo yenjoloba.
6) ibhodi engangenamlilo.
7) Indwangu engezansi yesondo lokugaya.
I-fiberglass mesh ivame ukusongwa ngezikhwama ze-polyethylene, bese imiqulu emi-4 ifakwa ebhokisini likathayela elifanele. Isiqukathi esijwayelekile esingamamitha angama-20 singagcwaliswa cishe ngama-70,000 m2 we-fiberglass mesh, futhi isitsha esingamamitha angu-40 singagcwaliswa cishe nge-150,000 m2 ye-fiberglass mesh.
Ukuhamba: ulwandle noma umoya
Imininingwane yokulethwa: izinsuku eziyi-15-20 ngemuva kokuthola inkokhelo ngaphambi kwesikhathi
Langaphambilini Ukushisa okumelana ne-Glass fiber nokwelukiweyo ngekhwalithi ephezulu
Olandelayo: Imicu Yokukhiqiza IMisa yengilazi eqoshiwe
Ukushisa nemithi Glass fibre Nokwelukiweyo Ukuzulazula nge hi ...